Guddoomiyihii baarlamaanka oo isku Casilay...Wararka naga soo gaaraya magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa sheegaya inuu is casilay Guddoomiyihii baarlamaanka Ethiopia Abadulla Gemeda.
Posted by salaad on October 08 2017
Wararka naga soo gaaraya magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa sheegaya inuu is casilay Guddoomiyihii baarlamaanka Ethiopia Abadulla Gemeda.
Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa warqadaha is casilaada ku wareejiyay guddiga fulinta ee ururka ”Eprdf” waxaana la soo warinayaa in guddiga uu aqbalay.
Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa cadaadis kala kulmay madaxda ugu sareysa dalka iyo Xildhibaanada baarlamaanka kadib markii lagu helay kiisas is biirsaday oo ku aadan shaqada baarlamaanka.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Guddoomiyaha lagu helay musuq lacageed iyo ku tagrifal awooda madaxda ugu sareysa dalka.
Guddiga fulinta ayaa sheegay in dhawaan ay soo sharixi doonaan shaqsigii badali lahaa Abadulla Gemeda oo mudda 10 sano ka badan ahaa Gudoomiyaha baaralamaanka Ethiopia.
Guddiga ayaa baadi-goob ugu jira shaqsiga buuxin lahaa booska Abadulla Gemeda, waxaana suuragal ah in xilkaasi la magacaabo iyadoo aanu dhicin doorasho Si kastaba ha ahaatee, sharciyada baarlamaanka Ethiopia ayaa aad uga duwan kuwa dalalka kale ee dhaca qaarada Africa.